Umvelisi kunye nomthengisi weplastikhi wase China | Mestech
Iimveliso zeplastiki ezifuna ukuveliswa kwesikhunta, sihlala sisenza ngokwasemzimbeni prototype zeplastikiukuqinisekisa uyilo lwayo. Ibhekisa kwimodeli enye okanye ezininzi ezenziweyo ezenziweyo ngokuzoba imbonakalo yemveliso okanye umzobo wesakhiwo ngaphandle kokuvula ukungunda ukujonga ubungqangi bokubonakala okanye ulwakhiwo. IPrototype yohlobo lweplastiki kwiindawo ezahlukeneyo ikwabizwa ngokuba sisampulu yeplastiki, imodeli, imackup.
IPrototype yendlela ebalulekileyo yokuvavanya uyilo lwemveliso kunye nokubonisa iimveliso. Isekwe kwimizobo yoyilo lwemveliso, kusetyenziswa ukuqhubekeka kwesixhobo somatshini okanye ukuphilisa i-laser okanye inkqubo yokubopha ukuvelisa iisampulu zokuvavanya uyilo kunye nokubonisa. Xa siyila imveliso entsha, iisampulu zihlala zenziwe ngokokubonakala kwemveliso okanye kwimizobo yolwakhiwo ukujonga ukubonakala okanye ulwakhiwo lobume beetemplate ezisebenzayo. Ukwenza iprototype yenye yezona ndlela zisebenzayo zokuqinisekisa uyilo lwemveliso kunye nokunciphisa umngcipheko wokuvelisa.
Ngenjongo yokubonelela ngeyona ndlela isebenzayo yokwenza iprototype yakho kunye nesixhobo, iinjineli zethu zoyilo zilapha ukuze zikunikeze uyilo lwenkonzo yokwenziwa kwemveliso yokuqinisekisa ukuba iimveliso zakho zihlala zilungele umenzi wemveliso yeplastiki. Ngokuhlalutya ngokucokisekileyo kunye nokukhethwa kwezinto ezithile, sinokuqinisa ukuzithemba kweprojekthi yakho kwaye sinikezele ngenkonzo yokukhawuleza ukukhawulezisa ukuyila- oku kubonelela ngamathuba aneleyo okuvavanywa kokusebenza okuya kuthi kubonise naluphi na utshintsho olunokwenzeka ekufuneka lwenziwe kuyilo ukuze luhambelane neemfuno zakho zentengiso. Oku kuqinisekisa ukuba imiba yoyilo lwemveliso ayingeni kwinqanaba lokulandelwa kwemveliso yokubumba, ukunqanda ukusilela kade kunye nenkunkuma enkulu yexabiso. Kwiimveliso ezinkulu zorhwebo, nokuba ziyimveliso ye-elektroniki entsonkothileyo, izixhobo zombane, iimoto, izixhobo zonyango, iibrashi zamazinyo, iikomityi zamanzi kunye nezinye izinto ezilula zemihla ngemihla, kwinqanaba lokuyilwa kwemveliso, isampulu yohlobo lwesampulu kufuneka yenziwe ukuvavanya nokuqinisekisa ukusebenza kobugcisa, ubuchwepheshe kunye neemeko zentengiso, kwaye zihlala ziphucula uyilo lokwenza ngcono. Fumana iziphumo ezilungileyo.
Iindidi kunye nokusetyenziswa kweprototypes zeplastiki
1. Inkangeleko yokubonakala: Ekuqaleni kwenqanaba loyilo lwemveliso entsha, yenza ukubonakala komzekelo ukuvavanya kunye nokuphucula ubume bembonakalo eyahlukeneyo yemveliso, kwaye ukhethe olona hlobo lubonakalayo nolunomtsalane kubathengi.
2. Uhlobo lwendlela yokwakheka:Emva kokuba uyilo lobume bemveliso lugqityiwe, ngesiqhelo iprototype yenziwa ngokuzoba kuyilo loyilo ngaphambi kokwenza umngundo. Umyili ujonga uhlobo loyilo lweprototype ukufumana ukuba yeyiphi into enesiphene kuyilo kwangaphambili, kunye nokuphucula nokwandisa uyilo, ukuthintela umngcipheko kwimveliso.
Umsebenzi osebenzayo: Ukuphendula kwiimfuno zabathengi okanye iimfuno zentengiso, uhlobo lwangaphambili lubonakalisiwe kwimarike nakubathengi ngaphambi kokuba kwenziwe ukungunda okanye ukungagqitywa.
Inkangeleko / ulwakhiwo prototype
Zintlanu itekhnoloji ephambili yokwenza iiprototypes zeplastiki ngolu hlobo lulandelayo
CNC Machining AMAGQABAZA plastic zeplastiki
1. CNC Machining:Iprototype iveliswa ikakhulu liziko lokusika. Ebhekisa kuyilo loyilo lwemveliso, izinto ezingafunekiyo zisuswe kwinto engenanto yeplastiki ngokusika isixhobo kwisixhobo somatshini wokusika, kwaye iinxalenye ezihambelana nobukhulu kunye nemilo ziyafunyanwa. Emva kokusebenza kwe-CNC, ukuqhubekeka kwencwadana yemigaqo kuyafuneka ngokubanzi.
--- Ubuhle: iindawo zinokwenziwa ngezinto ezahlukeneyo ngokweemfuno; iinxalenye ezenziweyo zinokuchaneka okuhle, ukomelela kwaye akukho kugqwetha; kulula ukufumana umgangatho wobunjani obungcono, kulula ukupeyinta, ukucoca i-electroplating kunye nokuprinta kwescreen. Zilungele iisampulu ezinokuthelekiswa kwendibano, iindawo ezihambayo, iinxalenye ezinkulu, iinxalenye ezinembonakalo yokuhombisa, kunye noomatshini abasebenzayo. Ixesha lokuthumela: i-7-8 iintsuku Kukulungele ukwenza ukubonakala komzekelo, iprototype esebenzayo kunye neprototype yolwakhiwo.
--- Izixhobo: ABS, PC, POM, PMMA, nylon, njl.
--- Ukungancedi: Ukungancedi kukufuna isixa esithile sokuqhubekeka ngesandla, iindleko eziphezulu. Ubunzima besakhiwo, kokuphakama iindleko.
2. SLAokanye istereolithography Prototyping - itekhnoloji ye-SLA yomeleza umaleko omnye ngokuvezwa kwe-laser. Ngokusebenzisa umqadi welanga ye-ultraviolet, ngokwecandelo lomnqamlezo eliyilelweyo loyilo lokuqala, indawo yokuphilisa ngenqaku, ukusuka kwindawo ukuya emgceni, ukusuka emgceni ukuya kumphezulu, ngokuhamba kweqonga lokuphakamisa, ukushicilela-ntathu kugqitywa ngokungqinelana . Iprototype yasuswa etankini kwaye yazinza phantsi kwesibane se-ultraviolet. Kuxhomekeke kubunzima, umhla wokuhanjiswa unokuba mfutshane njengeentsuku ezingama-2-3.
Iimpawu zeplastiki ze-SLA
3. I-SLSokanye ukukhetha i-laser sintering. Oku kubandakanya ukwakha izinto ezivela kwidatha ye-3D usebenzisa i-resin powders kunye ne-lasers. Inqanaba lokulinganisa elilinganiselweyo linokusetyenziselwa ukubonelela ngokusebenza, kubandakanya izinto "zehenjisi ezihambisekayo". Umhla wokuhanjiswa unokuba ziintsuku ezingama-2-3, kuxhomekeke kubunzima. Ngexesha lenkqubo yokuntywila kwe-SLS, iqondo lobushushu lomgubo (okanye ibinder) lifikile nje kwinqanaba lokunyibilika, kwaye alinakho ukuhamba kakuhle kwaye lizalise umsantsa phakathi kweengceba zomgubo. Ke ngoko, umphezulu wenxalenye ukhululekile kwaye urhabaxa.
--- Izinto eziluncedo: Amandla amnandi, akukho lula ukukhubazeka, ukuxhathisa, kunokumelana nobunzima kunye nenani elithile lokuchasana. Kulula ukudibanisa. Nokumelana. Kufanelekile ukuba kwenziwe prototype yolwakhiwo.
--- Izinto eziphathekayo: Usebenzisa i-nylon powder, i-polycarbonate powder, i-acrylic polymer powder, i-polyethylene powder, i-nylon powder exutywe ne-50% yeglasi, i-elastomer polymer powder, i-ceramic okanye isinyithi kunye ne-binder powder kunye nezinye izinto, ukuthelekiswa komsebenzi.
--- Ukungancedi: ukungalunganga komgangatho ombi kunye nomgangatho womgangatho. Isetyenziselwa prototype yolwakhiwo ekumgangatho ophezulu ongafunekiyo.
4. Umshini wokuqala(Ukuzalisa uVuvu) Ukuzaliswa kwakhona kwemipu yindlela yokwenza iimodeli ezincinci zebatch. Isebenzisa prototype yoqobo (i-CNC prototype okanye i-SLA prototype) ukwenza i-silica gel mold in vacuum, kwaye isebenzisa izinto ze-PU ukuthululela in-vacuum, ukuze ikwazi ukulinganisa into efanayo neprototype yoqobo, enokuqina kobushushu, amandla kunye nobulukhuni ngaphezu komzekelo wokuqala. Ukuba abathengi bafuna iiseti ezininzi okanye ezininzi, kufanelekile ukusebenzisa le ndlela, enciphisa kakhulu iindleko.。 Izixhobo zinokubonelela ngeendlela ezahlukeneyo zokulinganisa ukufezekisa ezinye zeempawu zeenaliti zokubumba. Umhla wokuhanjiswa unokuba ziintsuku ezisi-7 ukuya kwezi-10, kuxhomekeke kubunzima.
--- Izinto eziluncedo: Kuyimfuneko ukusebenzisa inkqubo ye-CNC okanye ye-SLA ukwenza isampulu yoqobo, efanelekileyo iiseti ezininzi ukuya kwiiseti ezininzi zeebhetshi ezincinci zeesampulu. Uzinzo lobungakanani, ukomelela kunye nobukrwada ziphezulu kune-SLA prototype, kufutshane ne-CNC prototype. Kukulungele ukwenza ukubonakala komzekelo wokuqala osebenzayo kunye neprototype yolwakhiwo.
--- Izinto: I-PU resin isetyenziswa ngokubanzi, kodwa ikwanokubonelela ngeendlela ezahlukeneyo zokulinganisa.
--- Ukungancedi: Azifanelekanga iindawo ezinobume obunzima. Ixabiso liphantsi kunelo leesampulu ze-CNC.
5. RIM (Reaction Inaliti Ukubumbela) nako ukusetyenziswa prototype yoqobo (CNC prototype okanye SLA prototype) eyenziwe isilika gel ngumngundo, ulwelo-candelo lyu lyu zifakwa kwi ngumngundo ngokukhawuleza kwiqondo lobushushu kwigumbi kunye bume uxinzelelo ephantsi, ephilisa kunye post -ukuqhubekeka ukufumana iisampulu zeplastiki ezifunekayo.
--- Izinto eziluncedo: Isetyenziselwa ukuphindaphindeka kwebhetshi encinci yeepaneli ezilula nezikhulu kunye nokuveliswa kweemveliso zodonga ezinyeneyo ezinkulu nezingafaniyo. Inezinto zokulunga okuphezulu, umjikelo wemveliso omfutshane, inkqubo elula kunye neendleko eziphantsi .- Izinto: Amacandelo amabini e-polyurethane PU.
--- Ukungancedi: Izinto ezisetyenzisiweyo azitshatanga.
Unyango lomphezulu womzekelo: ipolishi, ukupeyinta, ukushicilela isilika, ukuyila, ukucoca.
Inkqubo nganye yokukhawuleza ngokukhawuleza inokunikela ngeendlela ezahlukeneyo zokugqitywa kwesikhunta kunye neendlela zokupenda, ukwenzela ukudala ukubukeka kobugcisa. Okwangoku, iinjineli zethu zingacebisa ukuba zisetyenziswe ngokukhawuleza okukhawulezayo ekusebenziseni izixhobo. Njengenkonzo yokumisa enye, sikunika uthotho lweenkonzo, ezinje ngokuyilwa kwemveliso, ukwenza prototyping, ukwenziwa komngundo kunye nenaliti yokubumba, ukuvelisa, kunye nendibano yemveliso. Ngomnye wemisebenzi yokubonelela ngeesampulu zohlobo lweeplastiki kunye neentsimbi. Kumjikelo wophuhliso lweemveliso zakho, ngoncedo lwethu olupheleleyo, sinokuqinisekisa ukuba iimveliso zakho zingena kwintengiso ngendlela esebenzayo kunye nexabiso eliphantsi.
Uvavanyo lweprototype yinxalenye ebalulekileyo yoyilo lwemveliso. IMestech ikwabonelela ngoyilo lwemveliso, isixhobo sokubumba, ukubumba inaliti yeplastikhi kunye neenkonzo zendibano yemveliso ukuxhasa ngakumbi inkqubo yokuvelisa.
Egqithileyo Ushicilelo lwe-3D lwentsimbi
Okulandelayo: Inkqubo eyahlulayo yokufa
Ukuprinta okungu-3d koMatshini wePlastiki
Cnc IProtiki yohlobo lwePlastiki
Uhlobo lwePlastiki yePlastiki